cudur ka waqti kawaqti soo laba kaclaynaya
Author Topic: cudur ka waqti kawaqti soo laba kaclaynaya (Read 7190 times)
« on: October 04, 2009, 09:33:24 PM »
Somalidoc waad salaamantihiin,dabadeed haddii aan gudo galo su'aashayda ayaa ah sidatan.
waxaa jira cudurkaan oo runti aanan xaqiiqsan waxuu yahay malo maahee.
waxaan isku arkaa muddo kamuddo oo soonqaadkii hadda ahaa imoogay waxayna tahay cudurkaas markii uu igusoo fool leeyahay cudurkaan ayaan dareemayaa koow isha midig geeskeeda midig ayaa waxaan ku arkayaa waxaad moodid bidhaan dhaan dabangaalo camaloo kale al yacni waxaad moodo biriq biriq oo kale wax yar kadibne waxay isku badalayaan wax aadan runti is dhihi karin waa madax wareer ee ka daran taasoo kugu kalifaysa inaadan is dhaqaajin oo haddaad madaxa kor uqaadid aad moodayso in haraga iyo lafuhuba is haysanin oo isleedahay kuba soo dhac madaxii xannuunkuu hayana warkiisaba daa waxaa intaa sii dheer goortuu madax xannuukaa ku qabanayo ayaa kuu raacaysa matag.
hadaba walaalaha qaaligaa maadaama aad xagga health ga iiga ogaal badantihiin waxaan idinka doonayaa inaad si fiican iiga haqabtirtaan wax allaale waxaad igula talisaane yeele hadduu alle idmo.
illaa iyo haatane wax dhakhtara uma aan tagin oo markii aan dareemo xanuunkaa inuu iguso fool hayo ayaan kaniin neerbiyoona laqaa anoo naf kaga dayaya balse tan iigu habboonoo aan sameeyaa ah inaan jiifado ayadoo runti markaa igu dhibah jiifka yaa isku adkeeyaa saasna sameeyaa marka say wax ujiraan bal itafaasiila somalidoc.
waxana waxaan niyadda iska dhahaa waa neerfo balse ma xaqiiqasanin oo waxaan dhakhtar la'aadi waayo ayaa ah cudurkaano aan joogto kugu ahayn ee ah mid xoogaa muddo ah udhaxaysa runti muddadaasna maahan mid cayyiman ee waa mid hadba si ah sand.bil 5 bilood kolba suu alle ka dhigo, waxaan idinkaga fadhiyo ayaa ah walaalahayga qaaligaayoow xallinta cudurkaas iyo waxii talo kusaabsan ah.
waad mahadsantihiin dhammaan walaalaha somalidoc, iyo macaamiisheeda sharafta mudan.
Re: cudur ka waqti kawaqti soo laba kaclaynaya
« Reply #1 on: October 06, 2009, 11:14:09 PM »
Goonjab ama dhafoor-xanuunka (Migraine) waxaa keena bararka marinnada dhiigga ee maskaxda ku jira.
Waxyaabaha laga yaabo in ay kiciyaan madax xanuunkaan daran waxaa ka mid ah:
• Iftiin aad u birqaya ama biligleynaya, dhawaaq sare ama ur xooggan
• Cuntooyinka qaarkood ama cabitaannada sida:
─ Farmaajo adag
─ Hilibka qasacadaha ku jira
─ Rootiga qamadiga ama miraha leh gluten
─ Waxyaabaha cuntada lagu daro sida macaaneeyeyaasha macmalka ah
─ Kafeyiinta ku jirta qaxwada, shaaha, cabitaannada fudud, iyo shukulaatada
• Isbeddellada ku yimaada cimilada ama cadaadiska hawada
• Indhaha oo aad u daala
• Hormone haweenka jidhkooda isku dhex beddela sida waqtiga caadada bishiiba marka ah
• Daawooyinka sida kaniinyada dhalmada lagu koontaroolo
• Hurdo xad dhaaf ah ama hurdo kugu filan waayidda
• Ka boodidda cuntooyin ama cunto cunid la’aanta waqti dheer
• Sigaar cabidda ama la joogidda qof sigaar cabba
Goonjab wuxuu keenaa xanuun daran, isbeddel aragga ku yimaada, iyo lalabbo ama matagid. Ileys, buuq ama urta qaarkeed ayaa uga sii dari kara calaamadahaan. Xanuunku waxaa laga yaabaa in uu ka billowdo isha dhinacyadeeda ama dhafoorrada wuxuuna u badan yahay hal dhinac oo madaxa ah, laakiin waxana laga yaabaa inuu faafo.
Waxaa jira kara calaamado digniin ah oo ka horreeya dhafoor-xanuunka oo loo yaqaanno (Aura).
Calaamadaha digniinta waxaa ka mid noqon kara:
• Daal lama filaan ah ama halaaqyo ama hamaansasho is daba joog ah
• Isbeddel arag sida meelo mugdi kaa gala, in aad aragto ileys aad u ifaya, xarriijimo ama waxyaabo kale oo aan jirin, ama aragti cawlan
• Gacan ama lug ku xat-xatoota
Labada Nooc ee Dawooyinka Dhafoor-xanuunka:
• Dawooyinka Nafisaaddu waxay kaa gargaaraan maamulidda xanuunka dhafoor-xanuunka ama maskaxfaradka/goonjabka ka dib marka uu bilaabmo.
• Dawooyinka ka-hortaggu waxay kaa gargaaraan in aan dhafoor-xanuunku bilaabmin.
Waxa laga yaabaa in aad u baahan tahay mid ama labada nooc ee dawooyinka.
• Waxa la qaataa marka la dareemo calaamadaha ugu horeeya xanuunka dhafoor-xanuunka.
• Waxay kaa gargaaraan maamulida xanuunka dhafoor-xanuunka ka dib marka uu bilaabmo.
• Waxay u shaqeeyaan dhakhso si ay kaaga gargaaraan xanuunka dhafoor-xanuunka.
• Waxa laga yaabaa inay kaa gargaaraan lallabada ama calaamado kale.
• Waxa lagu helaa kiniin ahaan ama qaabab kale.
• Waxa la qaataa maalin kasta, xiitaa marka aanad qabin madax-xanuun.
• Waxay gargaar ka geystaan in aan dhafoor-xanuunku bilaabmin.
• Waxa laga yaabaa inay kaa gargaaraan in ay kaa yaraato tirada dhafoor-xanuunka kugu dhici jiray.
• Waxay shaqeeyaan kaliya marka la qaato maalin kasta.
• Badanaa waxa lagu helaa qaab kiniin.
Talo: utag dhakhtar si laguu baaro loona hubiyo cudurkaaga maadama ay dhici karto in calaamadahaan ay keeneen cudurro kale oo aan aheyn maskax-faradka.
Views: 42140 June 30, 2018, 08:20:49 AM
by Abdikadir abdi jama